गौतमबुद्ध रंगशाला निर्माण पुनः सुरु हुने
चितवन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासो र चर्चाको रुपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको रोकिएको निर्माण कार्य मंगलबारबाट सुरु गरिने भएको छ । यही जेठ १५ गते स्थानीयवासीले बाटो फराकिलो बनाउनुपर्ने भन्दै कच्चीबार भत्काएपछि काम रोकिएको थियो । ध्रुर्मुससुन्तली...
तथ्यांकमा विश्वकप क्रिकेट
लोकसंवाद संवाददाता, असार ३१, २०७६
काठमाडौं, एजेन्सी । पाँच सेटसम्म चलेको २०१९ काेविम्वलडन पुरुष सिंगल्सको फाइनलमा सर्बियाका नोवाक जोकोभिचले रोजर फेडररलाई हराएका छन् । ४ घण्टा ५७ मिनेट सम्म चलेको फाइनलमा पाँचौ सेट नै करीब २ घंटा चलेको थियो । जोकोभिचले पहिलो तथा तेस्राे क्रमशः...
इग्ल्याण्डलाई एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको उपाधि
काठमाडौं । इग्ल्याण्डले एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट २०१९ को उपाधि जितेको छ । आइतबार राति सम्पन्न फाइनलमा इग्ल्याण्ड रोमाञ्चक जित हासिल गर्यो । निर्धारित ओभरको खेल बराबरी भएपछि खेल सुपर ओभरमा पुगेको थियो । तर, सुपर ओभर पनि बराबरी भएपछि बढी...
नेपालद्वारा मलेसियासँगको टि–ट्वान्टी क्रिकेट शृंखला ‘क्लिनस्विप’
काठमाडौं । नेपालले मलेसियासँगको टिट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट शृंखलाक्लिनस्विप गरेको छ । नेपालले आइतबार दोस्रो टि-ट्वान्टी खेल जितेसँगै शृंखला२-० लेक्लिनस्विप गरेको हो । दोस्रो टिट्वान्टी खेलमा नेपालले मलेसियालाई ६ रनले हरायो । १७४ रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले ७ विकेट गुमाएर १६७...
काठमाडौं । झण्डै डेढ महिनादेखि चलिरहेको एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको कुम्भमेला आज (आइतबार) सकिँदैछ । यस्तोमा आज क्रिकेटको विश्वविजेताको पनि टुंगो लाग्नेछ । विश्वकपको उपाधिका लागि आयोजक इग्ल्याण्ड र न्युजिल्याण्ड प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । इग्ल्याण्डले टस जितेर ब्याटिङ गरिरहेको छ ।...
विंबलडनको फाइनलमा फेडरर र जोकोभिच बीच आज भिडन्त
काठमाडौं, एजेन्सी । स्विट्जरल्याण्डका रोजर फेडरर विंबलडनको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । उनले सेमीफाइनलमा स्पेनका राफेल नाडाललाई हराएरफाइनल पुगेका हुन् । फेडररले पहिलो पटक कुनै ग्रैंड स्लैमको सेमीफाइनलमा नाडाललाई हराएका हुन् । यो जीतका साथ फेडरर १२ औं पटक विंबलडनको...
काठमाडौं । एकदिवसीय क्रिकेटमा नयाँ विश्व-विजेताको आज (आइतबार) छिनोफानो हुँदैछ । जारी एकदिवसीय विश्वकप प्रतियोगितामा आज इग्ल्याण्ड र न्युजिल्याण्डबीच उपाधि-भिडन्त हुन लागेको हो । खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ः१५ बजे सुरु हुँदैछ । उपाधि जित्ने राष्ट्र एकदिवसीय विश्वकपको छैठौं विश्वविजेता...
लोकसंवाद संवाददाता, असार २८, २०७६
काठमाडाैँ । सिङ्गापुरमा आयोजना हुने आइसिसी टीट्वान्टी विश्वकप एशिया छनोटको तयारीमा रहेको नेपाली क्रिकेट टोलीले २०७६ असर २८ गते शनिबार मलेसियासँग खेल्ने भएको छ । मलेसिया भ्रमणमा रहेको नेपाली टोलीले घरेलु टोलीसँग दुई टीट्वान्टी अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट शृङ्खला खेल्नेछ । क्वालालम्पुरस्थित...
स्वदेश फर्कियाे राष्ट्रिय क्रिकेट टोली
काठमाडाै । एसिसी इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिता२०१९ को च्याम्पियन बनेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली २०७६ असार २५ गते राति स्वेदेश फर्कंदै छ । मलेसियामा सम्पन्न उक्त प्रतियोगिताको उपाधि विजेता टोली आज राति साँढे ९ बजे काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्न...
काठमाडौं । नेपाल यु-१९एसिया कपमा छनोट भएको छ । एसिसी यु-१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिसँगै नेपाल श्रीलंकामा हुन लागेको एसिया कपका लागि छनोट भएको हो । एसिया कपमा नेपालले भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । मंगलबार...
काठमाडौं । इन्टरनेसनल क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)ले जारी एकदिवसीय विश्वकप प्रतियोगिताका चार खेलाडीलाई सुपरस्टार घोषणा गरेको छ । आइसिसीले आफ्नो अफिसियल ट्विटर ह्याण्डलबाट ट्विट गर्दै भारतका रोहित शर्मा, अस्ट्रेलियाका मिचेल स्ट्रार्क तथा एलेक्स क्यारी र इग्ल्याण्डका जोय रुटलाई सुपरस्टार घोषणा गरेको...
वर्षाले रद्द गर्ला पहिलो सेमिफाइनल ?
काठमाडौं । इग्ल्याण्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आज (मंगलबार) म्यानचेस्टरमा हुने पहिलो सेमिफाइनलमा भारत र न्युजिल्याण्ड प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । यी दुई टिम ४४ वर्षपछि विश्वकपको सेमिफाइनलमा आमनेसामने हुँदैछन् । तर, यो खेल वर्षाले अवरुद्ध गर्ने सम्भावना छ । मौसम...
काठमाडौं । सेमिफाइनलबाट फाइनल पुग्ने मार्गचित्र के हो ? उत्तर सहज छ सेमिफाइनल जित्ने । तर, इग्ल्याण्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा भने भारत सेमिफाइनल नै नखेली फाइनल पुग्न सक्ने सम्भावना छ । भारतले न्युजिल्याण्डविरुद्ध भोलि (जुलाई ९) म्यानचेस्टरमा प्रतियोगिताको...
विश्वकप क्रिकेटमा को–को भिड्दैछन् सेमिफाइनल ?
काठमाडौं । इग्ल्याण्डमा जारी एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत राउन्ड रोबिनका खेल सकिएसँगै सेमिफाइनलका प्रतिष्पर्धी टिमको पनि टुंगो लागेको छ । पहिलो सेमिफाइनलमा भारतले न्युजिल्याण्डसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैछ । यो खेल जुलाई ९ मा हुनेछ । दोस्रो सेमिफाइनल भने अस्ट्रेलिया र इग्ल्याण्डबीच हुँदैछ...
काठमाडौं । एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको एक सिजनमा सर्वाधिक रन बनाउने रेकर्ड भारतका पूर्वक्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरको नाममा छ । उनले सन् २००३ को विश्वकपमा ६७३ रन बनाएका थिए ।तर, जारी विश्वकपमा रोहितले उनको यो रेकर्ड तोड्न सक्ने सम्भावना छ ।...
काठमाडौँ । सेमीफाइनलको दौडमा रहेको पाकिस्तान अन्ततः क्रिकेट वर्ल्ड कप बाट बाहिरिन पुगेको छ । आफ्नो अन्तिम लीग म्याचमा बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको पाक टोलीले पहिला ब्याटिङ गर्दै ५० ओभरको खेलमा ९ विकेट गुमाएर ३१५ रन मात्र बनाउन सक्यो । पाकिस्तानले...